ANAL ORGASM: ၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလမ်းညွှန်သည် - သတင်း
စအို orgasm ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - မိုက်မဲသောလမ်းညွှန်
အဆိုပါစအိုအော်ဂဇင်တစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စအိုကစားနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤထူးဆန်းသည့်အယူအဆမှာ - အောက်ခြေ (လက်ခံသူ) သည်၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မည်သည့်စအိုကစားနည်းမျိုးကိုမဆိုမကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိပြီး၎င်းသည်အနည်းငယ်မညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများသည်သူတို့၏ရေပုံးစာရင်းကိုစစ်ဆေးလိုသည့်အရာဖြစ်သည်။ မှား
ဤသည်မှာစအို orgasm ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သည်၊ ဤလမ်းညွှန်သည်သင့်ကိုအောင်မြင်ရန်သင်၏လမ်းစဉ်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
စအို orgasm ဆိုတာဘာလဲ။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်စအို orgasm ဟာစအို (stimulation) မှတဆင့်အောင်မြင်တဲ့အော်ဂဇင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ရောစပ်အော်ဂဇင် ) ။ သင့်တွင်ဆီးကျိတ်ရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ဇီဝဗေဒသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအများအားဖြင့်စအိုအတွင်းရှိရာနှင့်ချီသောနဗ်ကြောအဆုံးများဖြစ်သည်။
ဖေ့စ်ဘုတ် timeline သမိုင်းကိုဖျက်ပစ်နည်း
မည်သည့် erogenous ဇုန်များနည်းတူစအိုအားမှန်မှန်နှိုးဆွပေးခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။
ဒါကြောင့်မကြာခဏအထီး G-spot အဖြစ်ရည်ညွှန်းရဲ့အဖြစ်သင်, ယခင်ကဆီးကျိတ်အကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မယ်။
ဆီးကြိတ်သည် cis-gender ယောက်ျားများတွင်သုတ်ရည်ထုတ်ပေးသောဂလင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သဘာဝအားဖြင့်၎င်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Prostate massagers ကိုပေါင် ၂၅ နဲ့ရောင်းတယ် အမေဇုံအပေါ် ။
ဆီးကျိတ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် walnut လိုခံစားရတယ် နှင့်စအိုအတွင်း၌လက်ချောင်း၏အလေးပုံသုံးပုံ '' အရှည်တည်ရှိသည်။ နှိုးသောအခါလှဲသောအခါ, ဒါကြောင့်သင်စတင်မတိုင်မီတကယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်ကပြproblemနာမရှိရှာတွေ့လိမ့်မယ်သေချာပါစေ။
သင်တစ် ဦး cis- ကျားမလူမဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်သင်မွေးဖွားမှာအထီးတာဝန်ပေးအပ်မခံခဲ့ရလျှင်, အထက်ပါသင်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါဘူး။ သို့သော်ဆီးကြိတ်မရှိသူများအတွက်စအို orgasms မဖြစ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။
လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်အင်္ဂါအကြားမျှဝေထားသောနံရံမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုကြောင့်စအိုကစားခြင်းမှတစ်ဆင့် G-spot မိန်းကလေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ My Secret Luxury ၏ CEO ဖြစ်သူ Stacy Rybchin ကပြောကြားခဲ့သည် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး စအိုဆွပေးခြင်းသည်အစေ့၏ခြေထောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Lovehonesy လိင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Sammi Cole ကပြောကြားခဲ့သည် နာမည်ကြီး ပထမ ဦး ဆုံး G-spot ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်းသည်မကြာခဏရှေ့သို့သွားသောလမ်းဖြစ်သည်။ သူမဤသို့ပြောခဲ့သည် - 'ဗလတ်ဗတ်ရောဂါခံစားနေရသူများသည် G-spot အော်ဂဇင်ကဲ့သို့ပင်သင်သည်သင်၏' နှစ်သက်သောနည်းလမ်း '၌ ဦး ဆုံးအထွif်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါစအိုအော်ဂဇင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်ကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
'' ဒါဆိုရင်မင်းက clitoral stimulation လိုလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းရဲ့ပထမဆုံးအော်ဂဇင်ကိုအဲဒီလိုရအောင်လုပ်ပါ၊ ဒါကသင့်ရဲ့စအိုကြွက်သားတွေကိုသက်သာစေပြီးအရာရာကိုပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်။ '
သင်ကိုးစားသူတစ် ဦး နှင့်စအို orgasm ရှိခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
သင်နှင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စအိုကစားရန်တစ်ခါမျှမကြိုးစားခဲ့ပါကသင်နှင့်အဆင်မပြေသူတစ် ဦး ဦး နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်ပညာမဲ့ရာရောက်သည်။ သငျသညျကြိုတင်ဆွေးနွေးရန်နှင့်ကောင်းသောခံစားရနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မတစ်လျှောက်လုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
မကြာခဏသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်တစ်လလျှင် ၂၁ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသည်နောက်ပိုင်းအသက်တာ၌ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒီပန်းချီကားကိုသင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဆီးကြိတ်ကစားစရာအချို့ကိုဒီမွန်းလွဲပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ Njoy မှ Pfun plug သည် 'p spot' ကိုနှိပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောသံမဏိအပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏အော်ဂဇင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသူများအတွက်အလေးချိန်ရှိပြီးချောမွေ့သည်။ ကန့်သတ်ထောက်ပံ့ရေး, ယနေ့ဥစ္စာ snag လာ!
မျှဝေသည် Madame Trio? 10:53 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 15, 2018 ရက်တွင် (@madametrio)
lube ကိုသုံးပါ၊ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ
အကယ်၍ သင်သည်လိင်အင်္ဂါလိင်အင်္ဂါအတွက် lube ကိုသုံးဖူးပါက၊ မည်သည့်စအိုကစားပွဲအတွက်မဆိုလိုအပ်သောပမာဏသည်သင်သုံးသောသုံးဆဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိသင့်သည်။ စအိုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယောနိကဲ့သို့သောချောဆီမဟုတ်သောကြောင့်စေးမွှေးပါစေ။
အကယ်၍ သင်သည်စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါက၊ စအို၏နံရံသည်အလွန်ပါးလွှာပြီး STDs များကို၎င်းမှတစ်ဆင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကူးစက်နိုင်သည်။ Gonorrhea, ဆစ်ဖလစ်၊ မျိုးရိုးဗီဇ Herpes နှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီသည်စင်စစ်အားဖြင့်စအိုဖြင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါအချို့ဖြစ်သည်။
ကွန်ဒုံးနှင့် lube အကြောင်း, အဆိုပါ NHS ရေအခြေခံသောအပင်များကစေးကပ်ကွန်ဒုံးများပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ရေအခြေခံသည့်စေးကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသော lube များနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ပင်အစပိုင်းတွင်အချို့သောအဆင်မပြေမှုများရှိနိုင်သည်။ သင်သတိထားမိလျှင်အဆင်ပြေသင့်ပါသည်။
သင်ရုံစအို orgasm ရှိသည်ဖို့စအိုကိုလှုံ့ဆော်ရန်မလိုပါ
စအိုဖြင့်ကစားခြင်းမှတစ်ဆင့်အော်ဂဇင်ကိုရရှိခြင်းအတွက်ဆုဖလားမရှိပါ။ လိင်တံနှင့်ဆီးကြိတ်နှစ်မျိုးစလုံးရှိသူများအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ('prostate milking' ခေါ်သော sometiems) ကိုနှိုးဆွပေးသောသူများအတွက် အန္တိမ cis- ကျားမအမျိုးသားများအတွက် '' အော်ဂဇင်။
ပိုကြီးတဲ့လှေလိုချင်တယ် #? #? #neon #buttstuff #lube #lubeitup #noglovenolove #Repost @moontower_counseling
မျှဝေသည် စိတ်ကူးယဉ် Unlimited (@ fantasy.unltd @)၊ မေလ ၂ ရက်၊
ယောနိရှိသူများအတွက်မူတူညီသောကျောင်းအုပ်သည်သက်ဆိုင်သည်။ Good Vibrations မှ ၀ န်ထမ်းလိင်စိတ်ပညာရှင်ကာရိုးလ်ကအမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးကိုပြောခဲ့သည်။ 'စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အော်ဂဇင်ကိုသေချာစေရန်သို့မဟုတ်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုလုပ်ရန်မှာအလွယ်ကူဆုံးနည်းမှာ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရာသီဥတုကိုတိုးပွားစေသည်။
'' တချို့အမျိုးသမီးတွေကစအိုနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကနေအော်ဂဇင်စဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ clitoral ဆွအလွန်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်နိုင်ပါတယ်။ ''
သငျသညျစအို orgasm ရှိသည်ဖို့ full- လွစအိုလိင်ရှိသည်ဖို့မလိုပါ
ဆီးကြိတ်ထဲ၌ ၃ လက်မခန့်သာရှိသောကြောင့်ဆီးကြိတ်သို့မဟုတ်လိင်ကစားစရာကဲ့သို့၎င်းထက်ပိုမိုသောအရာများကိုအသုံးပြုရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။
မှန်ကန်သောမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့! ? ငါသိတယ်၊ ငါဟာစစ်မှန်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲ။ a❤️amoreaserious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious serious more serious serious serious seriousaserious serious seriousaserious serious serious seriousaaaaaseriousaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, a❤️aa ကျန်တဲ့ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမင်း❤️
မျှဝေသည် မင်းသမီး Emma Jane? 3:07 pm တွင် PDT မှာမေလ 4, 2019 ရက်တွင် (@yourpinkpearl)
ဆီးကျိတ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအလားတူပဲ။ သင်မနှစ်သက်သောစအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ပိုမိုပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်ရှာဖွေနိုင်သည် ဒီမှာ ။
ဟုတ်ပါတယ်, poo အချို့ရှိလိမ့်မည်
စအိုကသင် poo ဘယ်မှာလဲ, စိုစွတ်သောသုတ်အဘယ်သူမျှမအရေအတွက်ကသငျသညျလုံးဝအခမဲ့အတွေ့အကြုံ feaces အာမခံမည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်ရှုပ်ထွေး minimize လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ဒူးဆစ်သည်သင်၏စအို၏အတွင်းပိုင်းကိုရေဖြင့်သုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Douches ကို£7ပတ်ပတ်လည်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် အမေဇုံအပေါ် ။ စအိုအူဂူကိုအသုံးပြုရန်စအို orgasm မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အချို့သူများသည်စအိုသည်သန့်ရှင်းသည်ကိုသိသောကြောင့် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိကြသည်။
အကယ်၍ မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်သင်ဆေးကြောရန်သေချာစေပါက၎င်းသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါ - သင်မည်သည့်အတွက်လက်မှတ်ထိုးသည်ကိုသင်သိသည်။
• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုလက်ချောင်းပြရမလဲ - မိန်းကလေးများမှမိန်းကလေးများအထိ
• နို့သီးခေါင်း orgasm ယခုအရာဖြစ်ကြ၏ဒီမှာတ ဦး တည်းရှိသည်ဖို့ဘယ်လိုပါပဲ